Iri Kadhi Bhizinesi Kadhi! | Martech Zone
Iri Kadhi Bhizinesi Kadhi!
China, July 31, 2008 Chishanu, June 19, 2015 Douglas Karr
Wordle rova ari blogosphere a murume nemukadzi vhiki yapfuura uye bloggers ndave ndichigunun'una! Wordle ndeye Java application inoshandura yako tag gore kupinda chinhu cherunako.
ndaifunga Wordle yakanga inotonhorera, asi kwete hazvo blog blog.
Nhasi ndakabvunza Sharpminds. Mumwe wevanhu vari muchikamu, Linda Watts, akatambidza kadhi rake uye pakarepo akaisa kunyemwerera pachiso changu!
Linda aive neunganidzwa hwese hwadzo (pamwe nemamwe maratidziro akasarudzika), yega seti yakanangana nemazwi akakosha uye zvirevo, zvese zvine ruzivo rwake rwekuonana kumashure! Kugadzira kunoshamisa sei! Ini ndinofunga dai ndaive vechidiki veWordle, ini ndaizohaya Linda ndimuise iye anotungamira webhizimusi kadhi kadhi!
Linda aive Webmaster kwemakore ekupedzisira mapfumbamwe uye anoshamisa kugadzira, ane tarenda uye anofarira. Ndakamuseka iye nezvekuva geek - yake yekuisa kukirasi yakawedzera zvakanyanya.
Ndosaka ndichida kudzidzisa iyo Mhinduro dzeBitWise Sharpminds zviitiko, ini ndinodzidza zvakawanda kubva kune vese vakapinda zvekuti ndinobuda kunze ndichinzwa senge ndakadzidza kupfuura zvandakadzidzisa.
Linda arikutarisira basa idzva seWebhu, Webhu 2.0, uye Dhinda Tekinoroji Technology. Iwe ungangoda kumupa kudana kune mamwe epakutanga mazano! Ndinoshuva dai ndakafunga nezve iyi pfungwa pandakataura nezvayo kusarudza makadhi ebhizinesi vhiki ino! Handina chokwadi kana Linda ari kutsvaga basa renguva yakazara - iwe unofanirwa kubvunza kana iwe uine mukana weanogona webhu mushambadzi, zvakadaro.
Tags: bhizinesi kadhiTagtag goreTags
Maitiro Ekuvandudza iyo WordPress Chiitiko Sidebar kubva kuICal uchishandisa Google Calendar (uye imwe Google Kunakidzwa!)
Ndatenda Kunaka kweshamwari!
Jul 31, 2008 na10: 13 PM
Kutenda neiyi Doug. Ini ndakatumirazve tweet yako yekutanga tweet nekuti ndinoifarira zvakanyanya. Ndakatamba naWordle kwemaawa mashoma chinguva ndichidzoka ndikauya nemakore matatu akasiyana andakatumira pamadziro angu kubasa.
Zvino, ndinofunga panogona kuve nedzimwe nzira dzakanaka dzekushandisa idzi.
Kana isu tichifunga zvemifananidzo - isu kashoma kufunga simba remazwi sehwaro hweiyo inowanzo kuve mufananidzo-wakavakirwa.
Mufananidzo unogona kunge wakakosha chiuru chemazwi asi izwi gore rinogona kuve rakakosha kupfuura zvaunogona kutaura munzvimbo diki yebhizinesi kadhi!
Zvakanaka zvataurwa, Lynn!
Ndatenda nekutaura kunoshamisa mublog yanhasi. Iyi nzira yekutanga zuva rangu!
Makadhi angu ekusingaperi aive akamirira mubhokisi rangu retsamba pandakasvika kumba nezuro. Ini ndinokutumira iwe muenzaniso. Ndinoziva iwe uchafadzwa nehunhu hweMoo Printing.
Uye ndingawedzera here manakiro andakaita chikamu zuro Makandiita kuti ndifungisise mashandisiro emablog uye ini ndichave ndichishanda pane imwe semhedzisiro.
Ndatenda Linda! Raive rakakura boka revanhu varipo - izvo zvinogara zvichiita kuti zvive nyore.
Aug 1, 2008 na1: 09 PM
Unofanira kuda Wordle. Sezvineiwo zvakakwana ndakaita imwe svondo rapfuura yeangu "bhizinesi kadhi" saiti zviwanikwa. Ini ndinoda chokwadi chekuti iwe unogona kushandura iyo color scheme. Wordle matombo. Unogona kuona yangu pano http://cardsfreebusiness.com/
Aug 1, 2008 na1: 18 PM
Wakawedzera iyi kuunganidzwa wangu
Aug 1, 2008 na3: 38 PM
WOW, kunotonhorera sei !!! Ndakafadzwa kwazvo